भवानी राणाको कार्यकाल बढ्दै, शेखर गोल्छाको घट्दै – BikashNews
भवानी राणाको कार्यकाल बढ्दै, शेखर गोल्छाको घट्दै
२०७६ फागुन ३० गते १२:०१ विकासन्युज
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आज बस्ने कार्यसमितिको बैठकले दुईटा निर्णय गर्दैैछ । पहिलो, ७ प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचन स्थगित गर्दैैछ । दोस्रो, कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न निजी क्षेत्रबाट सक्दो प्रयास गर्ने निर्णय लिँदैछ ।
चैत २८ र २९ गते हुने महासंघको निर्वाचनलाई तत्काल रोक्ने वा नरोक्ने विषयमा कुनै निर्णय नहुने स्रोतले बतायो । आवश्यक पर्दा चैतको तेस्रो साता कार्यसमितिको बैठक बसी निर्वाचन सार्न विषयमा अनौपचारिक समझदारी बन्दैछ ।
कोरोना संक्रमणले विश्वव्यापी रुपमा निम्त्याएको संकट र नेपाल सरकारले गरेका निर्णयहरुको आधारमा महासंघको निर्वाचन तीन महिनालाई सर्ने लगभग निश्चित भएको महासंघका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।
निर्वाचन रोकिएको अवस्थामा अध्यक्ष भवानी राणासहित वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल ३ महिना लम्बिने छ भने आगामी अध्यक्ष शेखर गोल्छासहित नयाँ कार्यसमितिको कार्यकाल ३ महिना छोटिने छ ।
महासंघको विधान अनुसार हरेक वर्ष चैत्र मसान्तमा साधारणसभा हुनुपर्छ र हरेक ३ वर्षमा नयाँ नेतृत्वको लागि निर्वाचन हुनुपर्छ ।
विशेष अवस्थामा ३ महिनाको लागि साधारणसभा सार्न सकिन्छ । यहि व्यवस्थाका आधारमा यस वर्ष चैत मसान्तमा हुनुपर्ने निर्वाचन असार मसान्तमा सर्ने सम्भावना छ । केन्द्रको निर्वाचन हुनु भन्दा एक महिना अघि नै प्रदेशको निर्वाचन हुनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएकोले पनि केन्द्रलाई निर्वाचन सार्न दवाव पर्नेछ ।
यसरी निर्वाचन सर्दा अध्यक्ष भवानी राणाको कार्याकाल ३६ महिनाको सट्टा ३९ महिनाको हुने छ भने आगामी अध्यक्ष शेखर गोल्छाको कार्यकाल ३३ महिना मात्र हुने जानकारहरु बताउँछन् ।
एफएनसीसीआई साधारणसभाः कसरी हुन सक्छ स्थगित ? रोकिए फेरि कहिले गर्नुपर्छ ?
एफएनसीसीआई निर्वाचनः रोक्न प्रशासनको आग्रह, नरोक्न उम्मेदवारको दबाब